Parkinglọ Mposi Na-Agbanwe Agbanwe
Satọdee 15 Mee 2021
Parkinglọ Mposi Na-Agbanwe Agbanwe The Smartstreets-Cyclepark bụ igwe kwụ ọtọ, ebe ana-adọba ụgbọala nke ebe a na-adọba ụgbọala abụọ nke dabara na nkeji iji mee ka ọ dị mma na-adọba ụgbọala nke ebe a na-adọba ụgbọala n'ofe obodo na-enweghị mgbakwunye n'okporo ámá. Ngwá ọrụ na-enyere aka belata izu ohi, ma nwee ike ịwụnye ya n'okporo ụzọ ndị kachasị warara, na-ewepụta uru ọhụụ site na akụrụngwa ndị dị adị. Ejiri igwe anaghị agba nchara akụrụngwa nwere ike ịbụ agba RAL dakọtara ma kaa ya maka Ndị Isi Obodo ma ọ bụ ndị nkwado. Enwere ike iji ya iji nyere aka mata ụzọ gasị. Enwere ike ịmegharị ya ka ọ dabara na nha ọ bụla ma ọ bụ ụdị nke kọlụm ọ bụla.
Fraịdee 14 Mee 2021
Mkpuchi Magnesium Ọrụ nke Arome Agency na njirimara eserese na usoro nka maka nkwakọ ngwaahịa Kailani dabere na obere atụmatụ dị ọcha. Obere ihe a dabara na ngwaahịa nwere naanị otu ihe mepụtara, magnesium. Ihe edere edere bu ihe siri ike ma pinye ihe. Ọ na-egosipụta ma ike magnesium ma nwee ike nke ngwaahịa a, nke na-eweghachi ike na ike maka ndị na - azụ ahịa.
Tọọzdee 13 Mee 2021
Karama Mmanya Aroma na -emepụta njirimara nke ọma maka nnukwu onye nchịkọta ahụ bụ Gabriel Meffre nke na-eme afọ 80. Anyị rụrụ ọrụ dị ka ihe atụ nke 30s oge ahụ, nke nwanyị nwere iko mmanya sere onyinyo ya. Epekele ndị ahụ eji eme ihe na -eme ka ọ pụta ìhè site na iji ya mee ihe na ikpo ọkụ ọkụ iji mee ka akụkụ nke onye mkpokọta sie ike.
Wenezdee 12 Mee 2021
Nkwakọ Nri Ihe ịma aka maka imejuputa ngwugwu mgbawa nke akara BCBG bu ihe mebere nnwechi nke nkwanye ugwu na akara nke uwa. Mpempe akwụkwọ ndị ahụ kwesịrị ịdị obere ma bụrụ nke oge a, ka ha na-enwe mkpịsị aka a dị mma na akụkụ na-enye obi ụtọ na ọmịiko nke na-eweta ihe odide ndị mkpị edemede. Ihe aperitif a bụ oge amamịghe nke ga-enwe mmetụta na nkwakọ ngwaahịa ahụ.
Tiuzdee 11 Mee 2021
Steepụ A na-eme steepụ steepụ site na imechi iberibe profaịlụ igbe abụọ nwere akụkụ abụọ. N'ụzọ dị otu a, steepụ ahụ na - akwado onwe ya ma ọ bụrụhaala na ogo ọgaghị agafe ọnụ ụzọ. Nkwadebe tupu iberibe iberibe ndị a tupu oge eruo. Nkwakọ ngwaahịa na mbugharị nke mpempe ndị a kwụ ọtọ.
Mọnde 10 Mee 2021
Steepụ A na-eme ka steepụ UVine gburugburu dị gburugburu site na imechi profaịlụ igbe igbe U na V n'usoro ọzọ. Wayzọ a, steepụ ahụ na-akwado onwe ya ebe ọ bụ na ọ chọghị ogwe osisi etiti ma ọ bụ nkwado gburugburu. Site na usoro ya na nhazi nke ọhụụ ya, usoro a na-eweta ịdị nwayọ n'oge nrụpụta, nkwakọ ngwaahịa, njem na ntinye ya.
Aoxin Holiday Nkwari Akụ Satọdee 18 Septemba
Superegg Ntinye Ihe Ọkpụkpụ Fraịdee 17 Septemba
Bionyalux Ngwugwu Nlekọta Anụ Ahụ Tọọzdee 16 Septemba
Parkinglọ Mposi Na-Agbanwe Agbanwe Mkpuchi Magnesium Karama Mmanya Nkwakọ Nri Steepụ Steepụ